किन यस्ता मानिसको हातमा टिक्दैन धन-सम्पति ? यस्तो छ कारण ! – Khabar Patrika Np
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कार्तिक ०२, २०७८ समय: २३:५२:३६
धनी बन्ने रहर सबै मानिसको हुन्छ । तर अक्सर मान्छेले गरिबी मै आफ्नो जीवन व्यतित गर्छ । मानिस गरिबी हुनुमा विभिन्न कारण हुन्छ र कमजोरीहरु हुन्छन्। आज हामी त्यही कारण र कमजोरीहरु उल्लेख गर्न गइरहेका छौँ । यस्ता मानिसहरु जसले जीवनमा कहिल्यै धन कमाउन सक्दैनन् ।